Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geeridii Guddoomiyihii Gobolka Nugaal - Jowhar Somali Leader
Home News Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geeridii Guddoomiyihii Gobolka Nugaal
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geeridii Guddoomiyihii Gobolka Nugaal
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii Guddoomiyihii Gobolka Nugaal C/salaan Xasan Xirsi, kaasoo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo xalay ka dhacay Garowe.
Madaxweyne Farmaajo ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni, isagoo uga tacsiyadeeyay geerida Marxuumka, sidoo kale waxaa uu caafimaad u rajeeyay dadkii kale ee ku dhaawacmay.
Qaraxii ismiidaaminta ee xalay ka dhacay Garowe ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kaasoo isku qarxiyay Guddoomiyaha Gobolka Nugaal oo gaariga saarnaa, kuna sugnaa afaafka hore ee saldhigga Dhexe ee Garowe.
Sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay Taliyihii hore qeybta Faarax Galangalooli, kaasoo isna dhaawiciisa lagu daweynayo magaalada Garowe.
Weerarka ismiidaaminta ayaa waxaa sheegtay Xarakada Al-Shabaab, waana weerarkii labaad noociisa oo is qarxin ah oo ka dhaca magaalada Garowe, iyadoo shan sano ka hor sidan oo kale weerar is qarxin uga dhacay Garowe, kaasoo lala eegtay gaari ay saarnaayeen shaqaalaha Qaramada Midoobey.
Madaxweynaha Kenya oo ku dhowaaqay in la qaaday xayiraadii saarneyd magaalada Nairobi
Faahfaahin Iskahorimaad hubeysan oo ku dhacay magaalada Jowhar
Akhriso: War murtiyeedka Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Shir ka dhacaya Dhuusamareeb